Warbixinta Cusub waxay Tusinaysaa Minnesota Xaqiijinta Awoodda Awoodda Tamarta Nadiifka ah
Nadiifinta Tamarta Shaqooyinka Shirkadda Triple by 2050
Bixinta Kharashka Korantada Qoyska (Household Bills) Waxay hoos u dhigeysaa $ 1,200 Sanadkiiba
A warbixinta oo maanta la sii daayay waxay muujinaysaa in Minnesota ay ka fariisan karto dhirta dhuxusha gobolka, iyada oo aan dhisi doonin gaaska dabiiciga ah ee dabiiciga ah, haddana weli waxay dabooli kartaa tamarta si tayo leh iyada oo loo marayo ilo tamar nadiif ah oo dib loo cusbooneysiin karo Warbixinta, oo ay ku magacawday "McKnight Foundation", ayaa sidoo kale muujisay in gobolku uu dabooli karo himilooyinka gaaska aqalka dhirta lagu koriyo isaga oo hoos u dhigaya kharashka tamarta iyo kordhinta shaqooyinka tamarta nadiifka ah.
Warbixintu waxay faahfaahinaysaa sida Minnesota ay si weyn u yareeyn karto kalsoonida jiilalka fosilka iyadoo la beddelayo tamarta hadda loo isticmaalo dhismayaasha iyo qaybta gaadiidka leh ilo tamar oo nadiif ah si loo gaaro bartilmaameedka gobolka ee hoos u dhigista gaaska dabaysha: 80% ilaa 2050. Minnesota hadda ay ku guuldareysteen in ay la kulmaan himilooyinkooda dhimista kaararka.
Akhri warbixinta oo dhan, "Barnaamijka "Smarter Grid" ee Minnesota: Wadiiqooyinka Taabbagsan Nidaamka Gaadiidka Nabadgelyada, Raacsan ee la Gadan karo iyo Nidaamka Tamarta."Akhriso soo koobid.
Sababta arrintaani muhiim ugu tahay Minnesota:
Kharashka tamarta ayaa hoos u dhici lahaa. Heerka korontada ayaa hoos udhaca qiyaastii 30% celcelis ahaan qoysaska waxay ku badbaadinayaan qiyaastii $ 1,200 sanadkiiba kharashka tamarta.
"Tamarta nadiifku waxay ka caawisaa sii wanaajinta waxa aan jecel nahay inta badan gobolka, taas oo markaa soo jiidata oo hayso ganacsiyada iyo shaqaalaha."
- MADAXA MOSTAERT, MADAXWEYNAHA MADAXA IYO MASUULKA GUUD, MORTENSON
Waa maxay ganacsiyada ayaa leh:
"Gobalkeennu waa inuu tartiib tartiib tartiib ugu jiraa oo leeyahay nolol tayo sarre leh, xubnahayagu waxay yiraahdeen muhiim ayay u tahay Minnesota inay u guurto nidaam tamareed oo boqolkiiba 100 dib loo cusboonaysiin karo," ayuu yiri Amy Fredregill, oo ah Agaasimaha Agaasimaha Deegaanka ee Minneapolis Isbahaysiga Kobcinta Dheer ee Dheeraanta ah ee Minnesota, oo ah wada-shaqayn ganacsi oo ka kooban 31 ururo Minnesota ku salaysan oo ay ka faa'iidaystaan khibradahooda si ay u hormariyaan xuduudda soo socota ee sii jiritaanka ganacsiga. "Warbixintan waxay bixisaa habka sayniska ku salaysan, xogta la higsanayo si loo gaaro himiladaas iyada oo ka faa'iideysanaysa dhaqaalaha Minnesota iyo dadka halkan ku nool."
"Waxaa si aad ah u kordhaya soo saaridda tamarta nadiifta ah ee Minnesota soo bandhigtay fursado dhaqaale iyo mid dhaqaale, waxaanan ku faraxsannahay in aan qeyb ka nahay socdaalkan tamarta socda," ayuu yiri Trent Mostaert, Madaxwayne kuxigeenka iyo Maareeyaha Guud ee Mortenson. "Tamar nadiif ah wuxuu ka caawiyaa sii wanaajinta waxa aan jecel nahay inta badan gobolka, taas oo markaa soo jiidata oo hayso ganacsiyada iyo shaqaalaha. Warbixintan ayaa xoojisay tamarta nadiifka ah waa doorashada saxda ah ee dhaqaalaha Minnesota. "
Waa maxay kooxaha macaamiisha ayaa leh:
"Adeegyada Minnesota waxay ku qasban yihiin in ay macaamiisha siiyaan tamar la isku halleyn karo oo awood leh oo ay awoodaan, warbixintan waxay muujineysaa in tamarta nadiifka ah ay la kulmayso shuruudahaas," ayuu yiri Annie Levenson-Falk, Agaasimaha Fulinta ee Golaha Shacabka ee Muwaadiniinta. "Dhismayaasha waa in ay si xawli leh u wareejiyaan tamarta bilaashka ah ee kaarboonka - waa ikhtiyaarka ugu fiican ee macaamiisha."
Waa maxay saynisyahanka ayaa leh:
"Waxa ay ka walaacsan tahay in la arko warbixintan oo soo bandhigaysa xaalado kala duwan oo ay dhaqaalaha Minnesota si weyn u yareeyn karto, taas oo horseedi karta qiimaha korontada ee macaamiisha, hawo nadiif ah iyo abuurista shaqooyin cusub," ayuu yiri Ned Mohan, Oscar A. Schott Awoodda Awooda iyo Nidaamka ee Waaxda Qalabka Korontada iyo Kombiyuutarada, Jaamacadda Minnesota. "Daraasadani waxay tilmaameysaa, tan waxaa lagu gaari karaa oo kaliya adigoo badalaya isticmaalka tamarta korontada, ka dibna soo saaro dib u cusbooneysiin. Tani waxay shaki gelineysaa inaan sii wadno xoojinta iyo hal-abuurka. "
Wax badan ka baro halkan.
"Mashiinka Smarter-ka ee Minnesota: Wadiiqooyinka Wadajirka ah ee Nidaamka Gaadiidka Nabadgalyada, Nabadgelyada iyo Gaadiidka leh" waxaa lagu sawiray oo ay soo saartay Vibrant Clean Energy. GridLab waxay bixisay maareynta mashruuca, McKnight Foundation waxay dardargelisay daraasadda. Daraasadu waxay samaysay qaabka korantada ee korontada si loo go'aamiyo waddooyinka ugu fiican si ay u noqoto mid aad u sarreeya dhaqaalaha Minnesota.
Ku saabsan tamarta nadiifka ah ee Vibrant: Shirkad tiknoolaji ah oo heer qaran ah oo la aqoonsan yahay oo ku salaysan Colorado. VCE-da waxay abuureysaa software-yada wax-ka-qabashada kombiyuutarka si loo barto waddooyinka tamarta tamarta. Waxay kaloo sameeyaan daraasad ayadoo la adeegsanayo WIS: si ay u bixiso khabiir ku socda arimaha cusub ee korontada, decarbonization iyo kheyraadka kala duwan. Hadafka VCE-da waa in la caawiyo fududeynta tamarta guud, joogtada ah, iyo qiimaha jaban ee qof walba.
Ku saabsan maktabadda McKnight: Xarunta Qoysaska ku salaysan ee Minnesota, waxay raadineysaa inay hagaajiso tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka. Fikradaha barnaamijka waxaa ka mid ah horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo horumarinta bulshada, farshaxanka Minnesota iyo farshaxanada, sinnaanta waxbarashada, ka qayb qaadashada dhalinyarada, cimilada iyo tamarta Midwest, Darajada biyaha ee Mississippi, cilmi baarista xayawaanka, cilmi baarista dalagga caalamiga ah iyo hab-nololeedka miyiga. Waxaa la aasaasay sannadkii 1953, waxaana si madax-bannaan u maamula William iyo Maude McKnight, Hantidhawrku wuxuu leeyahay hanti ku dhow qiyaastii $ 2.3 bilyan waxayna bixisaa $ 90 milyan sannadkii.
Ku saabsan GridLab: Ganacsi aan macaash ahayn oo bixiya khabiir farsamo oo dhammeystiran oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan qaabaynta, hawlgalka, iyo sifooyinka qaabka dabacsan ee firfircoon si loo caawiyo siyaasadaha sameeya, u doodayaasha, iyo kuwa kale ee go'aamiya tamarta si ay ula socdaan isbeddelka tamarta